Dadweynaha reer Puntland oo si diirran u soo dhaweeyey heshiis beeleedkii Igdhays. – Radio Daljir
Garowe, Oct 22- Dadweynaha reer Puntland ayaa si diirran u soo dhaweeyey heshiis beeleed maalintii shalay ahayd la dhax-dhigay labo meelood oo ood-wadaag ah kuna dagaallamay deegaanka Igdhays ee gobolka Bari.
Xafiisyada idaacadda Daljir ee gobollada Puntland, ayaa illaa iyo shalay waxaa soo gaarayey hambalyo iyo bogaadin loo soo jeeedinayey waxgaradkii labadaasi beeleed ee go?aanka ku gaaray in ay heshiis iyo walaaltimo ku badashaan colaaddii muddada u dhaxaysay.
Dadka xiriirka la soo sameeyey idaacadda Daljir isla markaana soo dhaweynayey heshiiskaasi labada beelood la dhax-galay ayaa ku kala sugnaa gobollada kala duwan dawladda Puntland, waxaana dhammaantood laga dareemayey sida ay ugu faraxsan-yiin xalka nabadeed ee ay gaareen beelaha walaalaha ah ee dhawaan ku dagaallay tuulada Igdhays oo ka tirsan degmada ufeyn ee gobolka Bari.
Waxay dadkaasi ay iskugu jireen, siyaasiyiin, salaadiin dhaqan, nabaddoono, cuqaal, culimo aw-diin, ganacsato, aqoon-yahanno iyo waxgarad kaleeto oo aad u tiro badan, waxaana qaar ka mid ah oo ay idaacadda Daljir waraysatay ay sheegeen dareenkooda farxadeed ee ku aaddan heshiiskaasi in uu yahay mid aan marnaba la saadaalin karin.
Heshiiskaan oo ahaa mid ka kooban 11 qodob, ayaa madashii lagu kala saxiixday waxaa ku sugnaa madaxda dawladda Puntland oo uu ka mid yahay m/weyne faroole, qaar ka mid ah golaha xukuumadda iyo midka baraalamaanka, mas?uuliyiin ka socotay maamullo gobol iyo kuwo degmooyin, waxaana halkaasi looga dhawaaqay ciddii heshiiskaasi jabisa in tallaabo cad laga qaadi doono.
Labada beelood ee heshiiskaan la dhax-dhigay ayaa ah labo beelood oo wada dega deegaanno badan oo ka tirsan gobolka Bari, waxaana murankoodui ku salaysnaa dhul la doonayey deegaan cusub in laga sameeyo oo ay labada beelood isku maan-dhaafeen taas oo dhalisay dagaal dad badani ku dhinteen kuwo kalana ay ku dhaawacmeen.
C/fataax Cumar Geeddi?